Faa'iidooyinka caymis ee Dashboard Cam a for Your Car: Hadda aragtida iyo Outlook - Shiinaha Shenzhen Tryace Technology
Faa'iidooyinka caymis ee Dashboard Cam a for Your Car: Hadda aragtida iyo Outlook
Intro CAMERA DASH
Cam dashboard A waa camera a in la dhigayaa on your muraayada ama muraayada oo si joogto ah lagu qoro wax kasta oo dhaca inta aad wadid gaari ah. version More sare ee kaamirooyinka kaloo diiwaan gelin kartaa views danbe; qaar ka mid ah waxay leeyihiin aasaasiga-cas dareemayaal si aad u awood cajalado mugdi ah. camera ayaa si toos ah badalato iyo bilowdey in lagu qoro sida ugu dhakhsaha badan engine gaariga bilaabo. Waxa badbaadiyay dhammaan xogta video in kaadhka xusuusta ah. kamaradaha qaarkood waa awood lagu qoro in Qeexid High iyo samatabbixin tayada video weyn.
Tani waa technology gaar ah in ay noqon kartaa arrin xiiso leh wadayaasha badan. Waa technology baaluq iyo aad loogu isticmaalaa dalal badan halkaas oo shil oo khiyaameeya caymiska muuqataa in ay dhibaato ah (tusaale ahaan Russia, China).
WAA Cam DASH A WAXTAR wadayaasha?
waa fikrad wanaagsan in la haysto qalab noocan oo kale ah on board of baabuur? Sidaas ayaan u maleynayaa! camera waa in aad markhaati Ujeedada iyo karaa "hadlo" waayo, waa in aad wax dhacaan. Waxay noqon kartaa shil ay sabab u tahay dhaqdhaqaaq lama filaan ah ka gaari ee hore adiga ama shil been abuur ah in uu yahay ku dhowaad aan macquul aheyn in la aqoonsado ama si fudud xaalad u baahan in baaritaan faahfaahsan ka dib. Wax kasta oo ay tahay, Cam muraayada ah waxaa jiri doona in ay gacan ka Xaq ay soo ogaadaan.
Waa asturnaanta macluumaadka walaac ay dhacdo in this? Uma maleynayo, ilaa iyo inta video ku joogo iyadoo gaariga oo la isugu ma gudbiyo meelo kale. Waqtigan xaadirka ah cams dumisaan ugu isticmaasho kaadhka xusuusta ah, taas oo si joogto ah la dib-u-qoraal ah tan iyo video laga diiwaan geliyay loop a. Tani waxa ay keentey in kaliya dhowr saacadood ee la soo dhaafay ama maalmo ah video laga heli karo (taas oo ku xiran kaadhka xusuusta ee).
Cam DASH WAA beer CAGAARAN EE caymisyada
Waxaa jira laba urur oo u badan tahay in ay ka faa'iideysan lahaa ugu ka qalab noocan oo kale ah loo isticmaalo by macaamiisha: caymisyada iyo fulinta sharciga. Tani waa sababta Cam dumisaan aad buu u tari karo xalka ah ee shilalka iyo sheegashada gaadiidka.
ma hubo sida booliska arkaa fikradda ah cams dashboard baabuurta caadiga ah laakiin baabuurta booliska waxay leeyihiin technology this si aad qoraal xaaladaha wadada, anigu waxaan ahay. Waxaan qiyaasayaa lahaa ay ku qabsan lahaa technology this sida ay doonayeen xarunta kaliya shaqadooda.
Xaaladda la caymisyada ka yara duwan tahay. Waxaan ka war kasta oo caymisyada abaalmariyay macaamiishooda leh caymiska hoose isagoo Cam dashboard in ay gaari ma ihi. Dhab ahaantii, marka aan la hadlayo waxaa ka mid ah shirkadda caymiska weydiinaya haddii ay aqoonsadaan caddaynta via Cam muraayada ah in la tixgeliyo in habka qiimeynta dalab ay, jawaabta uu ahaa mid aad guud ahaan: "Waan soo dhawaynaynaa wixii macluumaad dheeraad ah in ay gacan lahaa si loo saxo qiimaynta shil iyo in la wajaho sheegashada ah. Laakiin ma waxaan aragti kasta oo gaar ah oo ku saabsan isticmaalka camera muraayada ah ee baabuurta kastoo; waa arrin cusub oo noo ... "
My la xiqiijiyay in ay tahay in aad ka dhigi isticmaalka xogta Cam dumisaan dood booliska ama maxkamadda si aad u hubiso in aadan arkaa in-noqon-at-qalad. Ma loo tixgeliyo at-qalad ka dib markii shil caawin kara looga hortago in caymiska aad ka sii kordhaysa. Intaa waxaa dheer, Cam dumisaan ah ayaa kaa caawin kara si loo ilaaliyo rikoor driving nadiif ah.
MUUQAALKA: MAXAA Dash KARTO CAMERA NOQDAA MUSTAQBALKA?
Ma jiraa mustaqbalka wax camera muraayada ah? Absolutely! Waxaan qabaa inay gacan ka gaysan karaan in ay labada qiimeynta saxda ah ee shilalka waddooyinka iyo dhaqanka darawal fiican. Waxaad heli doontaa a marag "kuwa talosaaran" kuwaas oo had iyo jeer "fadhiya" in gaariga iyo caddayn karaan dhibcood laakiin observer isku hubin doonaa in aadan qalad kasta oo tan iyo kuwaas la sidoo duubi doono iyo macluumaadka loo isticmaali karo in aad ka dhanka ah .
dhimista Caymiska: Mid ka mid ah xaalado aan ka fekeri karaa waa muuqaalka kore ee alaabta caymiska ku xiran isagoo camera video ah in gaariga tusaale dhimis caymiska Cam dumisaan kuwa wadayaasha ee go'aansada in ay ku rakibi qalab noocan oo kale ah. Dhab ahaantii, wax Cam dumisaan si weyn hoos ugu dhigi kartaa wakhtiga sheegashada-baaraandegidda caymisyada tan iyo Garsooreyaasha dalab ka heli kartaa runta ah si deg-deg.
wax soo saarka caymiska New macaamiisha: Tape-as-aad-drive caymiska noqon kartaa sidoo kale ka badan oo soo jiidasho leh macaamiisha haddii ay dareen in ay kiiskaaga waxaa loo qiimeyn doonaa mid aad u hufan iyadoo la kaashanayo of camera ah halkii la isticmaalayo a sanyihiin 50-50 xukunka looga hawlgalaa xaaladaha sida caymisyada badan maanta. Tusaale ahaan waxay noqon kartaa isku dhac dhanka ah laba baabuur waddo marka ay u muuqato in labada ahaayeen on ama in ka badan line xarunta (sidaas loo yaqaan "sideswipe") oo ma jiraan wax si ay u caddeeyaan aan duubo video ah.
Dhisay-in doorasho gaari: Intaas waxaa sii dheer waxaa suurto gal ah in loo habeeyey versions of cams dashboard heli karo iyaga oo gacanta ku soo saarka baabuurka mass sida feature gaar ah. Lahaanshaha baabuur noocan oo kale ah la camera ah si rasmi ah oo shahaado la aqoonsan yahay ayaa laga yaabaa in lacagta caymiska sida taayirrada barafka, qalabka digniinta ama gaari hybrid. Just ka fikir siyaabo kale ee gaadiidka sida diyaaradaha ama maraakiibta - waxay dhan yihiin qalabaysan sanduuqa qoro wax kasta oo madow ay taasi dhacdo. Maxaad baabuur waa in wax kasta oo kala duwan?
Extension of xal pay-as-aad-drive: Waxaa jira caymiska si loo yaqaan lacagta-as-aad-drive in loo si guul ah ay bixiyaan dhowr caymisyada. Bixi-as-aad-drive caymiska xisaabi lacagta sida ay dabeecada wadida qofka, abaalmarin driving ammaan ah halka raad iyo kordhinta kharashka caymiska on Hababka wadida khatarta ah. A qalabka "sanduuqa madow" rakibay gaariga raad-beegyada uu muhiimka ah ee safarka iyo ku wareejinaya xogta si uu caymisku, oo markaas dejisa heerka lacagta. Cam Dash waa dheeraad ah oo macquul ah ee caymiska this in ay buuxsan kartaa macluumaad dheeraad ah iyo aragti.
Fun, madadaalo, madadaalo: Mid ka mid ah isticmaalka xiiso of camera a baabuur waa marka ay qabanayaan safarka wadada - waxaad si fudud u abuuri kartaa video a safarka wadada fiican isku xubnihii video fiican. cams Dashboard shaqo badan kuu sameeyey ka heli kartaa!
Xaggee ka heli kartaa CAMERA CAR A?
Waa hagaag, waxaan ka helay sano lamaane anigaa iska hor via Arbacada ah. Waxaan aaminsanahay aad ka heli karto cams dumisaan hadda labada on Amazon ama Arbacada ah. camera A hufan baxaya qiyaastii laba boqol oo dollar, sidoo kale waxaa jira fursado ka jaban, laakiin sida cad tayada (gaar ahaan batari) ma aha in sare.